I-EA030 - I-Alarm ye-OMG Yokuzivikela Push-Button Keychain Alarm, I-LED Light eyakhelwe ngaphakathi - I-OMG Solutions
Ukusebenza kwe-push-inkinobho eyodwa kuphela, uma kucindezelwe kusebenze i-alarm ye-110dB enkulu ukuheha.
Ukukhanya okukhanyayo kwe-LED okwakhiwe kuyo kwenza kube lula ukuthola amakhakhi emnyango ekhaya noma ngezimoto
I-alamu e-ultra-slim ifaka kalula kunoma iyiphi i-keychain
Kulula ukuyisebenzisa, ifakwe inkinobho ye-OFF
Zizwa uphephile kungakhathaliseki ukuthi ukhona. I-Push-Inkinobho ye-Personal Security Keychain Alarm yisisombululo sokuphepha esiphathekayo esiletha ukuthula kwengqondo nomaphi lapho uya khona. I-alamu yokukhiya ikhibhodi ayidingi i-wiring yokufaka futhi ine-alamu enkulu ye-110 decibel esebenza ngokucindezela okukodwa kwenkinobho. Ihlanganisa inkinobho ehlakaniphile futhi i-LED ekukhanyeni indawo elula yemoto noma isikhombi somnyango. Ungalokothi ukhathazeke ngokuphepha kwakho futhi ukuphepha manje kuseduze njengoba okhiye esandleni sakho!
0.8 x 4.4 x amasentimitha angu-4.8
Ukubuka okuphelele kwe-4505 Ukubuka kwe-1 Namuhla